जाम्बियाका जनताले मतदान गरेपछि निर्वाचन परिणाम अनौपचारिक
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकिंग यात्रा समाचार » जाम्बियाका जनताले मतदान गरेपछि निर्वाचन परिणाम अनौपचारिक
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • समाचार • मान्छे • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार • जाम्बिया ब्रेकिंग न्यूज
जाम्बिया मा मतदान
जाम्बियाले मतदान गरे: गैर-पुष्टि नतिजा अनुसार श्री हिचिलेमा हाल .64.9४..33.1% भोटको साथमा चुनावको स्थितिमा छन्, पछि राष्ट्रपति एडगर लुung्गु ३३.१% मा छन्। उनीहरु डेमोक्रेटिक उम्मेदवार ह्यारी कालाबा (०.४%) र सोशलिस्ट पार्टीका फ्रेड मेम्बे (०.३%) पछि छन्।
जाम्बियाका वर्तमान राष्ट्रपति एडगर लुंगु पुनः चुनावको खोजीमा छन्।
उनको प्रतिद्वंद्वी Hakainde Hichilema, जाम्बिया मा एक प्रसिद्ध व्यापार कार्यकारी हो।
सञ्चार प्लेटफार्महरु, जस्तै SKYPE वा WhatsApp, फेसबुक वा ट्विटर यस समय जाम्बिया को भागहरु मा बन्द रहन्छन्, तर केहि क्षेत्रहरु लाई अनुसार अनलाइन फेरि हुन को लागी देखिन्छ। eTurboNews इनबाउन्ड इन्टरनेट यातायात तथ्या्क।
पहिलो अनौपचारिक गणना विभिन्न क्षेत्रहरु बाट आउँदैछ, तथापि जाम्बिया सामाजिक मिडिया च्याट गर्न को लागी निष्पक्ष र अनुचित परिणाम पोस्ट को आवाज।
देशभरका विभिन्न मतदान केन्द्रहरुमा अहिले अन्तिम मत गणना जारी छ। "कृपया झूट र भ्रामक जानकारी फैलाउन बाट बच्न २०२१ को चुनाव को बारे मा चुनावी जानकारी साझा गर्दा तपाइँको स्रोतहरु प्रमाणित गर्नुहोस्।" ईसाई चर्चहरु निगरानी समूह द्वारा एक पोस्ट हो।
अफ्रिकी चुनाव ग्रामीण क्षेत्रहरु मा निर्णय गरीएको छ र शहरहरुमा प्रतिस्पर्धा गरीएको छ। यो डा वाल्टर Mzembi, जिम्बाब्वे मा पर्यटन को पूर्व मंत्री र अफ्रीकी पर्यटन बोर्ड को कार्यकारी सदस्य द्वारा टिप्पणी छ। उहाँ आफ्नो शब्दहरु लाई बोलाउनुहुन्छ: Mzembi चुनावी तर्क!
हिजो राती उनले ट्वीट गरे: "जाम्बिया मा नतिजा को लागी प्रतीक्षा गर्दै -" हामी परिवर्तन चाहन्छौं! " - म सही सुन्दै छु? वा यो मेरो waxed कान हो? असाधारण साँच्चै!
धेरै अनौपचारिक गणनाहरु यस समय जाम्बिया मा सरकार को परिवर्तन को भविष्यवाणी गर्दै छन्।
जाम्बिया राष्ट्रपति दुई-राउन्ड प्रणाली को माध्यम बाट चुनेको छ। राष्ट्रिय सभाका १167 सदस्यहरु मध्ये १५ 156 जना एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रहरुमा फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली द्वारा निर्वाचित हुन्छन्। थप आठ जना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त गरीन्छन् र अन्य तीन जना पदेन सदस्य हुन्छन्: उपराष्ट्रपति, सभामुख, र एक उपसभामुख राष्ट्रिय सभा बाहिरबाट निर्वाचित। दोस्रो उपसभामुख घरको निर्वाचित सदस्यहरु बाट छनौट हुन्छ।
जाम्बिया मा भोटिंग उमेर १ is हो, जबकि नेशनल असेंबली उम्मेदवारहरु कम्तीमा २१ हुनु पर्छ।
२ July जुलाई UPND का महासचिव बटुके इमेन्डाले एक बयान जारी गरे कि पार्टी राष्ट्रपति लुung्गु द्वारा UPND राष्ट्रपतिको उम्मेदवार Hakainde Hichilema लाई प्रचार गर्न बाट रोक्न सरकारी संस्थाहरु प्रयोग गरीरहेकोमा पार्टी निराश थियो।.
३० जुलाईमा हिचिलेमा र उनको अभियान टोलीलाई चिपाटा प्रवेश गर्नबाट रोकाइएको थियो र चिपाटा एयरपोर्टको रनवेमा हिरासतमा राखिएको थियो। हिचीलेमा चिपाटा आइपुग्नु अघि पुलिसले उनका समर्थकहरुलाई अश्रुग्यास गरेको थियो। ३ अगस्त मा Mbala मा पुलिस Hichilema र उनको अभियान टोली शहर मा प्रवेश गर्न रोक्यो, पुलिस को दाबी संग कि उनी प्रवेश को लागी एक अनुमति को आवश्यकता छ।
Ziva एक गैर सरकारी संगठन हो, जो वकालत गर्दछ र जाम्बिया बाट मतदाताहरुको अधिकार को माग लाई बढाउन को लागी इन्टरनेट लाई अनब्लॉक गर्न को लागी भन्छ: "एक चुनाव प्रक्रिया मतदाता/मतदाताहरुको हो। #अनब्लक इन्टरनेट किन इन्टरनेट बन्द? पारदर्शिताको अभावले यो निर्वाचनको नतिजामा बाधा पुर्‍याउँछ।
उच्च मतदाता मतदान सामान्यतया पदाधिकारीहरु को लागी एक राम्रो संकेत होइन, र स्थानीय मतदाताहरु को अनुसार मतदाताहरु उच्च थियो।
म जाम्बियनहरु मा धेरै गर्व गर्दछु किनकि हामी संग देखाईएको छ
जाम्बिया मा हिजो मतदाताहरुको लाइन
भित्र मुड जाम्बिया चुनावमा धाँधली गर्ने कुनैपनि प्रयासको बिरूद्ध असम्भव बलियो छ। यो कार कथित रूपमा धाँधली को लागी चुनाव मतपत्र बोकेको भेटियो। मतदाताहरु लाई कुनै पनी स्पष्टीकरण को जरुरत नहुने तरीकाले यो मामला को सामना गर्न को लागी आफ्नो लाम छोडे।
जाम्बिया मा मूड चुनावमा धाँधली गर्ने कुनैपनि प्रयासको बिरूद्ध असंगत रूपले बलियो छ।
यो कार कथित रूपमा धाँधली को लागी चुनाव मतपत्र बोकेको भेटियो।
मतदाताहरु लाई कुनै पनी वर्णन को आवश्यकता छैन कि एक तरिका मा मामला संग व्यवहार गर्न को लागी आफ्नो कतार छोडे!
Zambians परिवर्तन को लागी बाहिर छन् pic.twitter.com/g6ZiZwH7ei
- Hopewell Chin'ono (@daddyhope) अगस्ट 12, 2021
जाम्बिया बाट एक सन्देश भन्छ:
शुभ - प्रभात जाम्बिया! डाटा आउँदै धेरै सकारात्मक छ र जनता को इच्छा स्पष्ट छ। तर सतर्क रहनुहोस् - जब एक बहिर्गमन शासन आतंकित हुन्छ, यो हताश उपायहरु को लागी रिसोर्ट गर्न सक्छ। त्यसैले शान्त र ध्यान केन्द्रित रहनुहोस्। हामी शान्ति र हाम्रो मुटु मा माया संग हाम्रो भोट को रक्षा गर्नेछौं। परिवर्तन यहाँ छ।
जाम्बिया बाट एक जरुरी सन्देश भन्छ हामी ZICTA लाई तुरुन्तै इन्टरनेट अनब्लॉक गर्न को लागी आह्वान गर्दछौं ताकि नागरिकहरु चुनावी प्रक्रिया को पालन गर्न र आफ्नो जीवन बिना बाधा जारी राख्न सकून्। यो शर्मको कुरा हो कि बन्द को आदेश दिने PF ले पनि VPN को माध्यम बाट बेलगाम बयान जारी गरीरहेको छ।
जाम्बियाले पहिले यसको गायनमा शोक मनायो संस्थापक राष्ट्रपति केनेथ कौंडा: शान्ति, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन उनको गीत थियो।
जाम्बिया चुनाव मा अधिक यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.